Somali - BBC News Somali_深圳到香港集運
Haiti ciidamo shisheeye ma ka caawin karaan soo qabashada calooshood u shaqeystayaasha baxsadka ah?
Haiti ayaa codsatay ciidamo shisheeye oo nabad ilaalin ah iyadoo ay koox ku taqasustay khaarijinta iyo shirqoollada dilka, oo u badnaa askar howlgab ka noqotay ciidamada Colombia, la sheegay inay ka dambeysay dilkii madaxweynihii Haiti, Jovenel Moïse.
Haiti assassination: What we know so far
How the presidency triggered unrest
TOOS Dhaqaale loo ururiyay dad la sheegay in maamulkii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida uu tacaddiyo u geystay
Ku soo dhawaada Tabinta tooska ah ee BBC Soomaali
Ninka imaamka masaajidka soo noqday ee loo haysto in uu dhacay 60 gabdhood
Cabdifataax oo maxkamadda la hor keenay a ayaa lagu soo eedeeyay dacwado la xiriira inuu dumarka xiriir Jacayl ula sameynayey si uu u dhaco
9 Luulyo 2021
Kooxda Taliban oo la wareegtay magaalooyiin muhiim ah
Daalibaan ayaa qabsatay marinada waaweyn ee xadka ay la wadaagaan Iran iyo Turkmenistan kadib howlgalo balaaran oo ay ka wadeen waqooyiga Afghanistan, sida ay saraakiishu sheegeen.
Macalimad aad loo baadigoobayay oo maydkeeda laga helay Japan
Qoyskeeda ayaa sheegay in ay tahay "qof caqli badan, dhiiranaan leh, kalsooni badan, daryeel badan".
Booliska Kenya oo baadigoobaya haweenay askari ah oo ragga "laynaysa"
Booliska ayaa sheegay inay dhib badan kala kulmeen raadinta haweenaydan maxaa yeelay waxaa adag in la helo qaab lagula xiriiro maadama ay teleefonkeeda kaga tagtay goobtii ugu horeysay ee ay dilka ka geysatay.
Askar Itoobiyaan ah oo lagu abaalmariyay sida ay u xasiliyeen Soomaaliya
Itoobiya waxay ka mid tahay shanta waddan ee ciidamada AMISOM, Dalalka kale waxaa ka mid ah Burundi, Jabuuti, Kenya iyo Uganda.
Joe Biden: "Afghanistan uma aanan tagin inaan dowlad u dhisno"
Ciidamada Mraykanka ayaa Afghanistan ka dagaallamayey ku dhawaad 20 sannadood, ka dib weerarkii argagixiso ee 11 September ee sannadkii 2001-dii.
Calooshood u shaqeystayaashii dilay madaxweynaha Haiti
Koox u dhalatay Colombia oo 26 ahaa iyo laba Mareykan ah ayaa dilay madaxweynaha Haiti, Jovenel Moïse, sida ay booliska sheegeen.
Maxaad ka taqaanaa dalka dadkiisu ugu dhaadheer yihiin caalamka?
Qaar ka mid ah madaxweyneyaasha la toogtay iyaga oo xukunka haya
8 Luulyo 2021
"Waxaan soo cabay kaadi, waxaana ku sigtay in aan cuno meydka saaxibkay"
Muuqaal, Maraykanka oo xaqiijiyay jiritaanka waxyaabo duula oo loo haystay qiyaali, Muddada 3,10
Suxuunta duusha waxaa muddo laga aaminsanaa waxyaabo qiyaali ah oo aflaamka lagu jillo
24 Juunyo 2021
Muuqaal, Axmed Saki: Sababta aan timaha u beertay, Muddada 4,38
Fannaanka da'da yar Axmed Saki oo waraysi siiyay BBC-da ayaa ka sheekeeyay sababaha timaha ay uga daataan dhallinyarada, iyo waxa isaga ku kalifay in uu timo soo beerto.
Dhageyso, DHAGEYSO: Markale dib ma u dhici kartaa doorashada Soomaaliya?, Muddada 3,38
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku casuumay madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka, shir Sabtida ka dhacaya Muqsisho.
23 Juunyo 2021
Dhageyso, Ehelka oo ka hadlay gabadhii lagu dilay Mombasa, Muddada 2,11
Ehelka oo ka hadlay gabadhii lagu dilay Mombasa ee lagu magacaabay Najma Cabdullahi Macallin oo ka mid ahayd ardaydii sannadkan ka baxay dugsiga sare.
Muuqaal, Habka loo soxo imtixaam dugsiyada sare ee Soomaaliya, Muddada 4,18
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Mudane Maxamed Caabbi Xasan ayaa BBC-da u sharaxay qaabka loo saxayo imtixaamka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee Soomaaliya.
22 Juunyo 2021
Dhageyso, Aden Barre Ducaale oo ka hadlay afduubka gabdhaha Soomaalida, Muddada 4,54
Xildhibaan Aden Barre Ducaale oo ka hadlay afduubka gabdhaha ayaa sheegay in ay ka warhayaan in seddax gabdhood ay maqan yihiin.
Muuqaal, Gabadh baratay cilmiga beeraha haddana beeralay noqotay, Muddada 3,46
Naciimo Sheekh waxa ay ka mid tahay dhallinyarada Soomaalida ah ee gudaha Soomaaliya ku bartay cilmiga beeraha, haddana waxa ay samaysatay beer ay iyada leedahay, taas oo ay shaqo abuur uga samaysay dad kale.
Muuqaal, Rag geel iska dhacay haddane isu celiyay, Muddada 1,51
Dhaqan ahaan, waa arrin soo jirtay in geela la kala dhaco, sidoo kalena waxaa marar badan ka bilowday dagaallo dhaliyay dhimasho badan.
Muuqaal, MUUQAAL: Geed cambe ah oo ay saddex jiil kala dhaxleen, Muddada 3,13
Ifka kuma soo gaarin wuxuuse intifaacsadaa Inniintuu beeray.
Muuqaal, Nin qurbaha ka soo laabtay oo kalluun iyo digaag ku dhaqda degmada Luuq, Muddada 3,47
Bashiir Xasan waxa uu ka midyahay Soomaalida qurbaha ka timid, wuxuu ku laabtay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Sawiradi ugu soo jiidashada badnaa toddobaadkan ee qaaradda Afrika
Sawirro xul ah oo toddobaadkan laga soo qaaday guud ahaan qaaradda Afrika.
4 Luulyo 2021
Tababarayaasha ciyaaraha kubadda cagta ayaa ah kuwa go'aanka weyn ku leh mustaqbalka kooxaha, ciyaaryahanada ayaa ah kuwa caan ah marka loo barbardhigo tababarayaasha.
Tobanka ciyaartooy ee ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan guud ahaan dunida
Ilaa shan naadi oo ka dhisan Yurub ayaa lagu tiriyaa in ay heystaan qaar ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dunida.
Ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara dalka Denmark Christian Eriksen ayaa imika soo y is "miirsada" ka dib markii uu taagnida ka dhacay xilli ay socotay ciyaar koobka Yurub oo u dhaxeysay dalalka Finland iyo Denmark, waxaa sidaasi sheegay xiriirka ciyaaraha ee dalka Denmark.
Mo Farah ma ka hadhay tartanka Olombigga ee Tokyo 2021?
Rajadii Mo Farah oo laba goor oo hore ku guulaystay horyaalka orodka Olombigga ee 10,000 mitir uu UK ugu safan lahaa tartanka Olombigga, ayaad mooda Rajadii Mo Farah oo laba goor oo hore ku guulaystay horyaalka orodka Olombigga ee 10,000 mitir ee uu haatanna ugu safan lahaa UK tartanka Olombigga, ayaad mooda in ay hoos u dhacday maadaama oo uu ku soo bixi waayey is reebreebka tartanka 10,000 mitir ee Yurub.
Waxaan halkan ku soo koobeynaa waxa aan ka ognahay mid ka mid ah bulshooyinka qarsoon ee ugu xiisaha badan taariikhda.
Waxaan halkan idiin kuugu soo gudbineynaa sheekada ku saabsan jasiiradda ugu yar dunida oo ay ku nool yihiin 11 qof oo kaliya ah.
20 Juunyo 2021
Ra’isulwasaarihii Japan ee uu maydkiisa xooray Maraykanka
Dambaska maydka ra'isal wasaarihii Japan ee waagii Dagaalkii Labaad ee dunida ayaa lagu saydhiyey badweynta Pacifiga markii la dilay ka dib sida ay muujiyeen dukumentyo Maraykan.
Magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa loo aqoonsaday magaalada ugu nolosha wanaagsan caalamka, qiimeynta sanadle ah xilli uu caalamka halakeeyay cudurka safmarka ee Coronavirus.
Erdogan maxay shucuubta dalalka Carabta u jecel yihiin?
Si arrintaan loo caddeeyo waxaa afti laga qaaday in ka badan 20 kun oo qof.
Mark Moore ayaa doonaya inuu Pakistan u soo saaro dharka gudaha laga xirto oo qiimahiisu uu jaban yahay – hasayeeshee waa inuu ragga ka gudbaa.
Itoobiya ayaa sheegtay iney adeegsaneyso dakadaha waddamada deriska la ah si ay uga kaaftoonto ku tiirsanaanta dakadaha Jabuuti oo keli ah.
Afar arrimood oo caqabad ku ah sii jiritaanka Shilin Soomaaliga
Isticmaalka Shilin Soomaaliga oo ay soo wajahday cabqabado badan kadib marki la diiday in qaato shacabkuna ay billaaben iney waddooyinka ku qubaan.
Kalluumaysato sabool ah oo heley cambarka nibiriga oo qiimihiisu gaaraya $1.5 milyan oo doolar
Waa sheeko ku saabsan sida nibiri kusoo caariyay badda uu wax weyn uga baddalay nolosha koox kalluumeysto ah oo ku nool mid kamid ah dalalka ugu saboolsan adduunka.
2 Juunyo 2021
Tani ma laga yaabaa inay noqoto dawada fayraska Korona?
Mudo sanad ah oo gaw ah ka dib markii la helay dawooyinka jaban ee la yidhaa steroid ee ka hortaga dimashada Covid, cilmi baadheyaashu waxay sheegeen in ay heleen dawo kale oo nolosha badbaadin karta.
'Waan ku qasbannahay in aan daawano bukaanka oo dhimanaya maalin walaba'
Wakaaladaha caalamiga ah ee caafimaadka ayaa ka digaya in "dhibaatada sii kordhaysa" ee ogsajiin la'aanta badan ee dalalka aadka u saboolka ah saameyneysa.
Ninkan oo lagu magacaabo Michael Packard ayaa sheegay in uu liqay nibiriga xilli uu badda quusayay.
Seddax arrimood ka ogow dawada loo helay cudurka ilowshaha ama asaasaqa
Balse seynisyahanada ayaa ku kala qeybsan waxtarka dawadan maadama uu jahwareer ka taagan yahay natiijada kasoo baxday tijaabada dawadan.
Maxay yihiin guryaha casri ah ee loo dhisayo haweenka dhiigga caadada uu ku dhaco ee Hindiya?
Hay'ad samafal ah oo ka howlgasha Mumbai ayaa ku howlan sidii haweenkan ay ugu sameyn lahayd guryo casri ah oo leh sariiro, musqulo, koronto iyo biyo.
Waxaa lagu eedeeyay dembiyo ay ka mid yihiin: "ku xadgudubka anshaxa qoysaska iyo bulshada Masar, iyo in ay ka qeybgaleen baahinta soo banbixinta iyo dhiiragelinta gabdhaha kale iyo ka ganacsiga dadka".
21 Juunyo 2021
Gorgor 150 sano la la’aa oo Britain lagu arkay
Nooc ka mid ah gorgorka oo loo yaqaano Gorgorka Masar oo dad ugu war dambeysay 150 sano ka hor ayaa lagu arkay dalka Britain
$28 milyan oo doolar ma ku bixin laheyd dalxiis hawada sare ah?
Qofkan aan la garanayn waxa uu yahay ee ku guulaystay xaraashka ayaa waxa uu qeyb ka noqon doonaa duulimaadkii ugu horreeyay ee uu bini’aadam hawada sare dalxiis ugu aado.
Ninka xuddunta u ahaa xeelada FBI-da ee basaasidda burcadda daroogada
Ciidammada ammanka ee dalal badan ayaa xabsiga u taxaabay ku dhawaad 800 oo qof oo looga shakisanayhay kadib markii kumannaan kun oo qof lagu khiyaanay adeeg talefon oo ay bollisku farimahooda ku arki karaan iyagoon daremaynin.
Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray
Wuxuu markii dambi noqday qof wax curiya oo shaqo abuur sameeya iyo in uu noqday malyaneer ka macaashay teknooloojiyadda, ninkan ayaa yarantiisa soo maray nolol adag.
Sideed isaga ilaalin kartaa in lagaa jabsado WhatsApp-kaaga?
Buracadda Internet-ka ayaa isticmaalaya khidad hore oo ay ku jabsadaan akoonnada WhatsApp-ka iyaga oo iska dhigaya qof aad asxaab tihiin.
Listen Next, Xiga Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 10 Luulyo 2021, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 10 Luulyo 2021, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 9 Luulyo 2021, Muddada 1,00,00
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 9 Luulyo 2021, Muddada 30,30
Khaladaadkii Hitler u horseeday guul-darrooyinka
Adolf Hitler wuxuu aamaaninsanaa falasafaddiisa ah, 'Albaabka jabi dhismaha oo dhanna wuu burburayaa.'
25 Juunyo 2021
Masar iyo Sudan ma waxay fulin rabaan duulaan ka dhan ah Itoobiya?
Warbaahinta Carabta ayaa si weyn u qaadaa-dhigtay fursadaha u furan dalalka Masar iyo Sudan kadib markii ay dowladda Itoobiya billowday wejiga labaad ee buuxinta biyo-xireenka khilaafka abuuray ee ay ka samaysay webiga Niil.
7 Luulyo 2021
Muxuu Qadaafi u jeclaa in ilaaladiisa ay noqdaan dumar?
Sida warbixinta lagu sheegay, ilaaladiisa gaarka ah, marka laga soo tago dumarnimadooda wuxuu ku xulan jiray inay yihiin bikro.
Wax ka ogow nolosha gaarka ah ee hogaamiyaha aadka looga baqo ee Kuuriyada Waqooyi?
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong Un, waxa uu ka mid yahay hogaamiyayaasha caalamka ee galaangalka badan leh, kaas oo ay jiraan dad jecel, kuwo neceb iyo xitaa kuwa doonaya inay wax badan ka ogaadaan.
Wax ka ogow dalal badan oo ay ka dhaxeyso cadaawadda soo jireenka ah
BBC-da ayaa sameysay liis ay ku qoran yihiin dowlado iska soo horjeeda oo xiriirkooda diblomaasiyadeed ee soo jireenka ah uu la mid yahay kan bisadaha iyo jiirka.
Waalidiintiisa ayaa u mahadceliyay maamulka, iyagoo sheegay in dhiirogelintan ay willkooda u horseedaysa mutaqbal wanaagsan.
Xilli shacabka Itoobiya ay maanta u dareereen goobaha codeynta si ay u doortaan xildhibaanada deegaanka iyo heer federaal ayaa waxaa baraha bulshada qabsaday warar marin habaabin ah oo ku saabsan doorashada.
Shan qaab oo lagu sugayo amniga doorashada Soomaaliya
Xafso Luqmaan oo shalay la seexiyay isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi ayaa la sheegay inay xaaladeeda wanaagsan tahay.